musha Classic FOOTBALLER Michael Owen Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeGweus Back Genius iyo inozivikanwa zvikuru nezita reZita reNickname; 'Munhu Anoshamisa'. Our Michael Owen Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inokupa zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri, hukama hwehukama uye zvimwe OFF-Pfungwa zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezve Legendary Life asi vashomanana vanofunga nezveMichael Owen's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Michael Owen Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Michael James Owen akaberekwa musi we 14th waDecember 1979 muKester, United Kingdom.
Sagittarius akaberekwa Owen ndiye mwana wechina wevabereki vake. Akaberekwa naJeanette Owen (amai) naTerry Owen (baba). Akararama pedyo nehuduku hwake hwose kukura hupenyu muHawarden, Wales.
Owen akaiswa kubhola pazera remakore manomwe nababa vake vaimuona semutambo anonyanya kuvimba mumhuri. Somukomana wechechi Everton, Owen akapinda Rector Drew Primary School muHawarden, Flintshire, kuchamhembe kweWales. Pakazosvika makore gumi, vamwe vatungamiri venyika vaitungamira vakaona kufambira mberi kwake.
Michael Owen (akapoteredzwa nevhu)
Owen ndiye aive akakurumbira mutambi wechikwata cheDeeside Area Primary School Under-11.
Iyi ndiyo nguva yaakarova Ian Rush yekodhi yegore ye20 yekambani imwechete nekunyora zvinyorwa-kuputsa 97 zvinangwa mumwaka mumwechete, kuchinjeka paRush rekodi ne 25 zvinangwa. Akapiwa mukana wekubudirira kwehuduku hwake.
Pazera remakore 12, apo Owen akatanga kupinda kuchikoro chesekondari. Iyi ndiyo nguva yaakagadzirira kuisa chibvumirano chechikoro nekibhu. Panguva ino, vatambi vebhora vakatora kufamba. Bhodhi yekutanga yekuona iyo inotambira Deeside yaiva Liverpool.
Chaizvoizvo, yaiva Steve Heighway, mutungamiri wechidiki wekuLiverpool wechikwata akanyorera Owen pachake. Iri sangano rechikwata rakanga risati rasvika kumwana ne rudo urwu rukuru.
Terry Owen baba vake vakati: "[Heighway] akanyora tsamba yekupwanya uye yaiva rudo pakutanga pakuona Michael. Tsamba yakanaka yeLiverpool nharaunda yakaratidza kuti vaida sei Owen kubva pazuva rimwe. "
Zvisinei, kare Owen akavapa chisimbiso chake, aifanira kupedzisa GCSE kuongororwa ayo akabuda zvakare pamusoro pekirasi yake. Pasinei nokubudirira mune zvedzidzo, Owen akanga asinganzwisisiki remangwana rake raiva chiitiko chebasa rekupira neLiverpool.
Michael Owen Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Owen akasangana naLouise Bonsall paRector Drew Primary School, muHawarden, Clwyd, North Wales. Izvi zvakaitika mugore ra1984 apo Owen aiva nemakore gumi nemana. Vose vakava shamwari uye vakakurira kuti vave vadiki veve sweethearts uye zvakare, vakuru vanoda.
Louise Bonsall anowanzotumidzwa seWAG uyo angasarudza bhiza kuhomwe. Ndiye mutasvi webhiza anobata. Kare kumashure, apo Michael akanga ari mukomana mutsara akangwara, achikwevera kutarisa kwevashandi vePeopleership kubva pazera remakore gumi, Louise aigara achiita bhiza.
Pasinei nekuroora mumwe wevanyori vemakwikwi anozivikanwa munyika muno makore mazhinji adarika, Louise Owen haasi iye WAG. Iwe hauzoni kumuona achibuda kumabhokiti eusiku, uyewo haaiti nezvekuvhima uye kugadzirwa kwezvokuzora semakwikwi emitambo.
Zvinonyanya kukoshesa mhuri yake yekutanga uye mabhiza ake wechipiri. Iye nemurume wake vanochengetedza zvinyorwa zvavo zvakanyanya - chaizvoizvo Louise haana kumbobvumira kubvunzurudza.
Vakanga vabatanidzwa pa 14 February 2004, uye vakaroora pana 24 June 2005, paCarden Park Hotel muKester, Cheshire. Vaviri vacho vakanga vatanga kuronga kuroorwa pamba pavo asi vakashandura zvirongwa pavakaudzwa kuti kana chireisheni chakatumirwa kumutambo womuchato, nzvimbo yacho inofanira kuwanika kune imwe yemichato kwemakore matatu.
Vakabva vasarudza kuroora muhofisi yekunyora muzvipfeko zvisina kujeka uye vanozogamuchira zvakanakisisa zuva rinotevera munzvimbo dzeimba yavo. Pasi pane mufananidzo wemuchato wavo.
Mufananidzo wechato chaMichael Owen
Vaviri vakatenga Lower Soughton Manor kuFlintshire, North Wales, kwaanochengeta motokari dzake. Louise Bonsall anoda mabhiza.
Mwanasikana wavo, Gemma Rose, akaberekwa pa 1 May 2003. Sezvakambotaurwa kare, Gemma akaonekwa mumifananidzo yavo yemuchato. Owen akazvitsaurira chitsauko chose kumwanasikana wake Gemma mubhuku rake roupenyu, "Michael Owen: Kubva paRechen, My Autobiography."
Pana 6 February 2006, vaine mwanakomana anonzi James Michael. Mwana wavo wechitatu, mwanasikana, Emily May, akaberekwa musi wa 29 October 2007. Mwana wavo wechina Jessica akaberekwa pa 26 February 2010. Pasi pane mufananidzo waOwen nemhuri yake inoshamisa.
Mhuri yaMichael Owen Photo
Michael Owen Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Michael Owen anobva kumhuri yakadzika inofara mhuri yeWelld inotanga mari yekutambisa mari. Pasi pane mufananidzo we1998 waOwen pamba nemhuri yake (baba, mukoma nomunun'una naAndirea mukoma wake) muNorth Wales.
Pose, ane hama mbiri nehanzvadzi iyo. Vanun'una vake ndiAndrew Owen, Terry Junior, Karen Owen uye Lesley Partridge. Owen ave achionekwa saiye mwanakomana waaida zvikuru wababa vake uyo pachake aimbova mutevedzeri wemutambo uye akatamba kumakwikwi akadai Chester City uye Everton (mutungamiri wepamberi neLiverpool mwanakomana wake).
Young Michael uye baba vake
Pasi pane mufananidzo waJeanette Owen uyo amai vanozvikudza naMichael Owen.
Jeanette Owen (kure kuruboshwe)
Owen akambozvitenga mumugwagwa wose wemhuri yake yakawanda muEwloe, iyo iri mune imwe nzvimbo pedyo neaimbogara.
Kunyanya zvakadaro, Muna 2004, hanzvadzi yaOwen Karen yakarova nevechiduku vaviri, vakaedza kumubata. Paakazarura kuti akanga ane pamuviri, ivo vakatiza. Pakupedzisira, Owen ndiye mukwambo wepamberi wemuuto Richie Partridge.
Michael Owen Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Post Madrid Pilot Training
Mushure mokunge Owen adzokera kuUnitedral kubva ku Real Madrid kuzotamba kuNewcastle, akaenda kune imwe nzvimbo yeAEE zuva rega rega kuitira kuti afambe, nehelicopter, kudzidzisa nekambani yake. Izvi zvakazarura kuti akapfuma sei.
Michael Owen's Helicopter inosvika pakudzidzisa pasi
A helipad yakarongeka yakaiswa mukati mechigaro cheimba yaOwen uye chikwata chake kuti agone helicopter yake yakanaka iyo yaaifamba nayo uye yakashandisa iyo kudzidzisa pakuva pivha.
Michael Owen, akatasva Helicopter yake
Owen pakupedzisira akadziviswa kubva pakudzidziswa kuti ave mutyairi weNewcastle United mushambadzi wekambani nekuda kwekubhadharisa mari yemishonga yeupenshu.
Michael Owen Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -unhu
Michael Owen ndiye ane zvinotevera kune unhu hwake hwakanaka.
Strengths: Pasina mubvunzo, iye akanaka, ane rupo, anofungidzira uye ane unhu hwakanyanya.
Kushaya simba: Anokwanisa kuvimbisa zvinopfuura zvingagona kununura, kushivirira zvikuru uye achati chero chinhu pasinei nokuti unopindirana sei.
Sagittarius likes: Owen anoda Rusununguko, kufamba, uzivi uye kuva kunze.
Sagittarius haafariri: Owen haadi kufarira vanhu, vachidziviswa.
Pamusoro pezvose, ane kodzero yekushandura pfungwa dzake muzviito zvekuita uye angaita chero chinhu kuti azadzise zvinangwa zvake.
Michael Owen Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Mobility uye Horse Man
MunaApril 2013, Owen, pamwe neimbova Formula One mutyairi Mark Webber, vakatenga chiduku chiduku mumusangano wehupfumi weWorldlobster. Owen pachake ane motokari dzakawanda. Rudo rwake rwemotokari yemoto rwakamboonekwa apo iye ne Wayne Rooney vainakidzwa nesangano rekutya zvakare mumakore.
Owen anofarirawo mutambo webhiza uyo wakabereka kubhejera kwake unhu. Ane mahombekombe akawanda emakwikwi, akadzidziswa naTom Dascombe. Akakuvadza bhiza Brown Panther iyo yakakunda rudzi rukuru ku Royal Ascot mu2011.
Michael Owen Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Television Personel
Owen akazvinyenyeredza mumutambo wevhedhizheni yevana Hero kune Zero. Mupurogiramu, Owen aizotanga kubva pahuwandu hwemashizha akazvimirira iye muCharlie Brice mumba kuti ape mazano munguva dzenhamo.
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai nokuverenga Our Michael Owen Childhood Story pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Gerard Pique Utano Nhau Plus Untold Biography Facts